INKQUBO YE-KOMINSKY YEXESHA LESITHATHU LOKUKHUTSHWA KOMHLA, ISAMENTE, ITREYILA, IINDABA -IRADIO TIMES - UMDLALO WEQONGA
Inkqubo ye-Kominsky yexesha le-3 yomhla wokukhutshwa, i-trailer kunye ne-cast njengoko uAlan Arkin ephuma ngaphambi kwexesha lokugqibela
Umboniso weGolden Globe ophumelele iNetflix Inkqubo yeKominsky isetelwe olunye uhambo. Umdlalo weqonga kukudala ixesha elisisibhozo u-Emmy otyunjiweyo u-Chuck Lorre (weThe Big Bang Theory kunye ne-Two and Half Men tummeng) kwaye ulandela iinkwenkwezi uMichael Douglas kunye no-Alan Arkin njengabahlobo ababini abalupheleyo abahamba kumzi-mveliso weqonga nakwiminyaka yabo elandelayo kwi Ilos Angeles.
Nangona kunjalo, kukho intshontsho elincinci - u-Alan Arkin akazukubuya njengearhente yaseHollywood uNorman Newlander, eshiya uMichael Douglas ukuba ashenxise ukubaleka kwakhe yedwa.
Kuya kuba lixesha lesithathu elahlukileyo kancinci njengoko sijonga indlela ibali likaSandy Kominsky elifikelela kwisiphelo ngaphandle komhlobo wakhe wexesha elide ecaleni kwakhe.
Nantsi yonke into ofuna ukuyifumana malunga neKominsky Method yexesha lesithathu.
Uphi ixesha leNdlela yeKominsky ye3 yokukhutshwa komhla?
INetflix iqinisekisile ukuba iKominsky Method izakubuya iziqendu ezithandathu, kwaye lixesha lokugqibela, ngolwesiHlanu we-28 kaMeyi. Kukho iziqendu ezimbalwa zonyaka ozayo. Omabini la maxesha onyaka 1 kunye no-2 ayeneziqendu ezisibhozo.
Ixesha lokuqala elisungulwe ngo-Novemba ngo-2018 kunye nexesha lesibini ngo-Okthobha u-2019.
Ngaba eli lixesha lokugqibela leNdlela yeKominsky?
Ewe, eli lixesha lesithathu nelokugqibela. Kwingxelo, umyili u-Chuck Lorre uthe unemincili yokuqukumbela ibali ngesi sahluko sokugqibela.
Indlela kaKominsky ibeyiprojekhthi yenyani kum, kwaye ibe ngamava amangalisayo ukubona impendulo efudumeleyo evela kubaphulaphuli nakwabagxeki, utshilo.
Indlela kaKominsky ihlaziyiwe ixesha lesithathu nelokugqibela.
UMdali u-Chuck Lorre uthe, 'Kube ngamava amnandi ukubona impendulo efudumeleyo evela kubaphulaphuli nakwabagxeki. Ndonwabile ukusongela ibali ngesi sahluko sokugqibela.
Umgca weNetflix (@iNetflixueue) Nge-2 kaJulayi 2020
Ngubani ophakathi kweKominsky Method?
Umboniso ukhokelwa nguMichael Douglas (njengoSandy Kominsky) kunye noAlan Arkin (njengoNorman Newlander).
Umlingisi ophumelele u-Oscar uMichael Douglas, oneminyaka engama-75, wonwabele umsebenzi omninzi, enamakhredithi aquka iWall Street, emva kweCandababra, uMtsalane obulalayo, isiQinisekiso seSiseko, iAnt-Man, enye yeFlew Over the Cuckoo's Nest, kunye neZitalato zaseSan Francisco.
Ixesha lesithathu alizukubona ukubuya kuka-Alan Arkin- omnye ophumelele u-Oscar obekade efakwe kumdlalo bhanyabhanya nakwimiboniso bhanyabhanya kubandakanya u-Edward Scissorhands, u-Little Miss Sunshine, u-Catch-22 no-Argo.
UDouglas uza kujoyinwa kwisizini yesithathu ngokubuyisa ilungu lesamente uSarah Baker, odlala intombi kaSandy uMindy. Uyaziwa ngo-Young Sheldon, uMkhankaso, kunye namaxoki amakhulu. Emva koko kukho uNancy Travis njengoLisa, oqhawule umtshato nothatha izifundo zokubambela noSandy.
Abanye abadlali ukuba bavele kulo mboniso ukuza kuthi ga ngoku baquka uLisa Edelstein (njengendodakazi kaNorman eyilahlileyo, ikhoboka), uPaul Reiser, uMelissa Tang, uSusan Sullivan, uJane Seymour, uDanny DeVito, uAlison Janney, uBob Odenkirk, noJay Leno.
Umboniso ukwangezelela kubalingisi abaqhelekileyo uKathleen Turner njengoRoz Volander, owayengumfazi kaSandy, owabonakala njengenkwenkwezi yeendwendwe kwisizini yesibini. UVolander uza eLos Angeles ukunceda ukucwangcisa umtshato kaSandy. U-Turner no-Douglas bobabini babeneenkwenkwezi kuRomancing iLitye, iJewel yeNayile kunye neMfazwe yeRossi kunye ukuze ibe yinto yokuhlangana kwakhona!
Iinkwenkwezi zeendwendwe zibandakanya uMorgan Freeman kunye nomlawuli uBarry Levinson, bobabini abadlala iinguqulelo eziyinyani zabo.
Ngaba ikhona itreyila kwiKominsky Method?
Itreyila entsha yakhutshwa ngaphambi kokubuya komboniso kule nyanga.
Isakhiwo sendlela yaseKominsky: Yintoni umboniso malunga?
Idrama yomdlalo weqonga ngaphambili yayingumntu ophethe izinto ezimbini kulandela umdlali owaluphalayo (kunye nomqeqeshi obambeleyo) uSandy Kominsky kunye nearhente yakhe yexesha elide, uNorman Newlander. Njengoko i-Netflix ibeka, i-duo iyaqhubeka nohambo lwabo njengabahlobo ababini abenza i-curveballs ezingenakuphepheka zobomi njengoko behamba kwiminyaka yabo kamva eLos Angeles, isixeko, ngaphezu kwayo yonke into, esixabisa ulutsha kumdlalo ohlekisayo kunye novakalelo.
Ukuza kuthi ga ngoku, sibonile iindlela zamabali ezibandakanya iingxaki zeprostate, usizi kunye nokufelwa ngumfazi, ukuba likhoboka lomdlalo, ukuthanda abadlali abancinci, ukuthanda ubomi kamva, idrama yosapho kunye nobuhlobo.
Ixesha elisemthethweni leNetflix leenkcazo ezintathu zifundeka ngolu hlobo: USandy Kominsky kufuneka ajonge indlela ukuguga okujongeka ngayo ngaphandle komhlobo wakhe wakudala uNorman Newlander ecaleni kwakhe kwisizini yokugqibela ye-'Kominsky Method. 'Ubomi buba nzima ngakumbi ngokufika kuka-Roz owayesakuba ngumfazi wakhe. IVolander. Ubudlelwane bobabini obudumileyo buzele buvutha xa efika e-LA ukuze achithe ixesha kunye nentombi yabo uMindy kunye nesoka lakhe uMartin. Eli xesha le-'The Kominsky Method 'lijongana nemali, ukufa, uthando, ukubulala kunye namaphupha azalisekayo. Ngamanye amagama, iqhelekile.
Inkqubo yeKhominsky yexesha lesithathu ikhutshwa ngeNetflix nge-28th kaMeyi, amaxesha okuqala kunye amabini afumanekayo ukusasaza ngoku kwiNetflix. Ungajonga kwakhona Olona luhlu lubalaseleyo kwiNetflix kwaye Iimuvi ezilungileyo kwiNetflix ukukugcina ukonwabisa okanye undwendwele Isikhokelo seTV ezinye zibukele.
abantu vs oj simpson cast
into omawuyisebenzise njengesixhobo sokuvula ibhotile
444 inani lengelosi
iinkosi zendalo yonke 2021 umhla wokukhutshwa
zikhangeleka njani iimfene